सिनो खाने मान्छे, जसले ६३ वर्षदेखि नुहाएका छैनन्
०६,२०७४ इरान । नेपाल भन्दा धेरै अगाडी विकसीत मानिएकोैं इरानमा एक यस्ता व्यक्ति छन्, जो संसारका आममान्छेभन्दा उल्टा छन् । उनी ६३ वर्षदेखि नुहाएका छैनन् ।
८३ वर्षीय अमोउ हाजी जसको शरीरमा मैलोको मोटो पत्र जमेको छ । तर, अमोउ भन्छन्, ‘यही फोहोरका कारण ८३ वर्षदेखि म स्वस्थ छु ।’ फोह.. .. .. …
महिलाहरुको भित्री वस्त्र ‘ब्रा’ रातको समयमा सुत्नुअघि फुकाल्नु सहि कि गलत भन्नेबारे विवाद रहिआएको छ ।कतिपय महिलाहरु रातको समयमा सुत्दा ‘ब्रा’ले निद्रा बिथोलेको बताउँछन् भने केहि महिलाहरु ‘ब्रा’ लगाएर सुत्दा स्तनको आकार राम्रो हुने र नझोल्लिने दाबी गर्छन् ।हालै मेडिकल .. .. .. …
संसारकै अनौठो होटल ! जहाँ खाना होईन 'विषालु सर्प र अजिंगरको मासु' खान पाइन्छ
एजेन्सी । भियतनामको हनोईमा रहेको एक रेष्टुरेण्टको चर्चा निकै नै भैरहेको छ ।त्यस होटलमा सर्पको मासु विषालु अजिंगरको मासुका कारण चरित भैरहेको हो । जहाँ ग्राहकले सर्पको मासुदेखि रगतसम्म खान पाउँछन् ।
सर्पको मासु र रगत पिउँदा पुरुषत्व बढ्छ भन्ने स्थानीयको धारणाका कारण पनि यो .. .. .. …
किन थुनियो शालिकको मुख?
काठमाडौँ, राजधानीको चावहिलस्थित पशुपति कलेजका विद्यार्थीहरुले बढ्दो प्रदूषण रोक्न सचेतना अभियान थालेका छन् । यसअघि सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण गर्दै आएका उनीहरुले 'सक्छौं सफा गरौं, सक्दैनौं फोहर नगरौं !' भन्ने नाराका साथ शनिवार राजधानीस्थित सबै शालिक तथा मूर्तिहरुको सफाई गर्.. .. .. …
१० तस्विरमा हेर्नुहोस्, जसले मृत्युलाई धोका दिए
एजेन्सी । संसारमा केही यस्ता मानिसहरु पनि हुन्छन्, जो आनन्दका लागि जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति पनि सामना गर्न पछि हट्दैनन् । यसमध्ये कोहि अग्ला पहाडको बीचमा टाँगिएको डोरीमा बिना कुनै सहायतामा हिड्छन् त कोहि भीरभिरै साइकल कुदाउँछन् । त्यस्तै आज हामी तपाईलाई केही यस्ता तस्विरहर.. .. .. …
कतिपय समाजमा महिलाका पर्याप्त विकसित अर्थात ठूला स्तनलाई आकर्षक मानिन्छ र पुरुषहरू ठूला स्तनप्रति आकर्षित हुन्छन्, शायद यसैले पनि होला महिलाको सौन्दर्य तथा आत्मसम्मान स्तनको आकारसंग गाँसिएको ।
स्तनको नाप वा आकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता वा चासो त आफ्नो यौन साथीलाई पर्याप्त आकर्.. .. .. …
प्रजनन अंगको विकासले युवायुवतीमा कौतुहलता पनि थपिदिन्छ । नेपालको जनसंख्यामध्ये २२ प्रतिशत किशोरकिशोरी छन्् । सामान्यतया किशोरीहरूमा ११ देखि १४ वर्ष््िभत्र शारीरिक परिवर्तन देखिन्छन्् ।
किशोरीहरूमा शरीर चौडा हुने, स्वर अझै सुरिलो हुने, पाठेघर बढ््ने, महि.. .. .. …
सेक्सपछि किन सुत्छन् पुरुष ?
पति, पत्नीवीच आपसी समझदारीको साथै शारीरिक सम्वन्धले पनि नजिक हुन जरुरी छ । यसले दम्पतीवीचको सम्वन्धमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बताइन्छ । प्रायः पुरुषहरू शारीरिक सम्वन्धपछि सुत्ने र तुरुन्तै निदाउने गर्छन । यसरी पुरुषहरू सेक्सपछि सुत्नुका ५ कारण यस्ता छन्
१) थकाई – पुरुषहरू प.. .. .. …
महिलाको अँगालोमा फेला परे बाबा रामदेव ! सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
नयाँदिल्ली, १८ मंसिर । भारतका योग गुरु बाबा रामदेव बेडरुममा एक महिलासँग अँगालो मारेर बसेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचारमा उल्लेख गरेका छन् ।
तस्बिर आपत्तिजनक त छैन । तर, तस्बिर योग गुरु रामदेवको आचरणअनुसारको भएन भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूम.. .. .. …
स्टेसन म्यानेजर पदमा भँगेरो नियुक्त !
काठमाडौं , मंसिर १४
रेडियाको स्टेसन म्यानेजर पदमा भँगेरो नियुक्त भएको छ । अछामको पहिलो सामुदायिक रेडियो रामारोशन एफएमले रेडियोको स्टेसन म्यानेजरमा भँगेरो नियुक्त गरेको हो । रेडियोको प्रशारण केन्द्रमा १ वर्षदेखि बसिरहेको भँगेरोलाई सोमबारबाट लागू हुने गरी मानार्थ स्टेसन म्याने.. .. .. …